स्वास्थ्य Archives ~ Dakshinkali Online
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार २१:१९ Dakshinkali Online
काठमाडाैं । दक्षिणकाली नगरपालिकामा काेराेना संक्रमण कारण हाेम आइसाेलेशनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएकाे छ । नगरका प्रमुख र उपप्रमुखकाे स्वास्थ्य लाभकाे सन्देश लिएर नगर अन्तर्गतका स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले संक्रमितकाे घरमै पुगेर स्वास्थ्य परामर्श सहित स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुभएकाे हाे । आज(शुक्रबार) वडा नं ३ मा काेराेना संक्रमण कारण हाेम आइसाेलेशनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री […]
दक्षिणकाली नगरपालिकामा आज एक काेराेना संक्रमितकाे मृत्यु, थपिए १२ संक्रमित (सूची सहित)
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:३६ Dakshinkali Online
काठमाडाैं । दक्षिणकाली नगरपालिकामा पछिल्लाे २४ घण्टामा काेराेना संक्रमित १ जना महिलाकाे मृत्यु भएकाे छ । नगरपालिकाकाे स्वास्थ्य शाखाद्वारा जारी दैनिक प्रतिवेदन अनुसार वडा न १ की ८२ वर्षीया महिलाकाे काेराेना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाे जानकारी दिएकाे हाे । यस्तै. नगरपालिकामा पछिल्लाे २४ घण्टामा थप १२ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । प्रतिवेदन अनुसार ६ […]
दक्षिणकाली नगरपालिकामा थप १६ जनामा काेराेना पुष्टि, कुन वडामा कति ?(सूची सहित)
२३ बैशाख २०७८, बिहीबार १८:३३ Dakshinkali Online
काठमाडाैं । दक्षिणकाली नगरपालिकामा पछिल्लाे २४ घण्टामा १६ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । नगरपालिकाकाे स्वास्थ्य शाखाद्वारा जारी दैनिक प्रतिवेदन अनुसार ९ जना पुरुष र ७ जना महिला गरि १६ जनामा संक्रमण देखिएकाे हाे । याे सँगै नगरपालिका क्षेत्रमा हालसम्म काेराेनाकाे दाेश्राे लहरमा संक्रमित हुनेकाे संख्या ५३ पुगेकाे छ । जसमध्ये महिला १७ जना […]
२२ बैशाख २०७८, बुधबार २१:२७ Dakshinkali Online
काठमाडाैं । दक्षिणकाली नगरपालिकामा रहेकाे चाल्नाखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुनः काेभिड जेनरल आइसाेलेसन वार्ड सञ्चालनमा आएकाे छ । काेराेनाकाे दाेश्राे लहर फैलिँदै गएकाे र नगरपालिका क्षेत्रमा समेत काेराेना संक्रमितकाे संख्या बढ्दै गएपछि चाल्नाखेलमा काेभिड आइसाेलेसन वार्ड सञ्चालनमा आएकाे हाे । लायन्स क्लब अफ काठमाडाैं पद्मसम्भव दक्षिणकालीले दक्षिणकाली नगरपालिका र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको सहकार्य र पहलमा […]
दक्षिणकाली नगरपालिकामा थप १३ जनामा काेराेना पुष्टि, कुन वडामा कति ?(सूची सहित)
२२ बैशाख २०७८, बुधबार २०:५१ Dakshinkali Online
काठमाडाैं । दक्षिणकाली नगरपालिकामा पछिल्लाे २४ घण्टामा १३ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । नगरपालिकाकाे स्वास्थ्य शाखाद्वारा जारी दैनिक प्रतिवेदन अनुसार ११ जना पुरुष र २ जना महिला गरि १३ जनामा संक्रमण देखिएकाे हाे । याे सँगै नगरपालिका क्षेत्रमा हालसम्म काेराेनाकाे दाेश्राे लहरमा संक्रमित हुनेकाे संख्या ३८ पुगेकाे छ । जसमध्ये महिला ९ जना […]
थप ३ हजार ५५६ जनामा कोरोना पुष्टि, १ हजार ५०३ डिस्चार्ज
२८ आश्विन २०७७, बुधबार १४:०३ Dakshinkali Online
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ३ हजार ५५६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले उपत्यकामा २१२९ सहित देशभर ३ हजार ५ सय ५६ जनामा काेराेना पुष्टि जानकारी दिनुभयो । यो सँगै संक्रमितको संख्या १ लाख १५ हजार ३५८ पुगेको छ । जसमध्ये […]
२८ आश्विन २०७७, बुधबार १३:५७ Dakshinkali Online
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना परीक्षण अब एक हजार रुपैयाँमा नै हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एन्टीजेन बेस्ड टेस्टको शुल्क १ हजार रुपैयाँ तोकेको हो । मुल्य समयानुकल समायोजन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन चौथो संसोधन स्विृकृति भएको जानकारी गराउँदै गाइड लाइनमा व्यवस्था गरिएको एन्टीजेन परीक्षण राष्ट्रिय […]